Android လုလင်: April 2014
Android OS 4.3 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာ Root ဖောက်နိုင်ဖို့အတွက် Apk လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ။ Apk ဆိုတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ပြီး Root ဖောက်စရာမလိုပါဘူး ဖုန်းထဲမှာထည့်ပြီး Install လုပ်လိုက်ရုံပါ ဘဲ။ Reboot ကျသွားပြီးပြန်တက်လာရင်တော့ Root Access ဖြစ်သွားမှာပါ။ တစ်ခုတော့ ကြိုပြီး ပြောထားချင် ပါတယ်ဗျာ ဖုန်းတိုင်းတော့ ရမယ်လို့ အာမမခံပါနိုင်ပါဘူး။ Huawei အပြင် အခြားသော တရုပ်ဟန်းဆက်တွေ ကိုတော့ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Android OS 4.3 အထိ Root ဖောက်ပေးနိုင်တဲ့ - RootGenius v1.9.2 For PC
Android User တွေနဲ့ Phone Service သမားတွေပါ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Root Tool လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ RootGenius v1.9.2 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီRoot Tool လေးက Android OS 2.3 မှ 4.3 အထိ Root ဖောက် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Huawei, ZTE, Samsung & HTC ပြင် အခြား Brands 300 အထက်ကို Support လုပ်နိုင် ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Root Wizard features
1 covering all current Android vulnerabilities integrated sets of ROOT engine
2. supports Huawei, ZTE, Samsung and HTC and other domestic brands, covering Android 2.3-4.2 more than 300 models
3. safety risk-free, easy access ROOT privileges
simple, clear ---- link mobile phones, click Root, step, Root so simple
you can post Root ---- brush into third-party ROM, make your phone more personality; streamlined boot items, uninstall stubborn own applications!
1 Root significantly enhance the speed of
2. enhanced support for 2.3.x and 4.3 systems ROOT ability
3. Updated ROOT authorization management component to address the 4.3 version of the Samsung models ROOT incomplete question
4. supports Samsung S5, OPPO Find7, the latest machine Typeakey ROOT
Download ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Viber ဆော့ဝဲထဲက ၀ယ်ရမယ့် sticker လေးတွေကို Freedownload ရယူချင်သူတွေအတွက်
ဝယ်ရတဲ့ဟာတွေထဲက ကျန်ခဲ့တာ ရှိရင်. နာမည်ပြောပေးပါ. အနော် တင်ပေးပါ့မယ်..
အနော်ကတော့ Storage/sdcard0/viber/media/.stickers: ထဲက မ , လာတဲ့ အတိုင်း နာမည်မပြောင်းထားဘဲ တင်ပေးလိုက်တယ်.
စုစုပေါင်းက 40.6MB ပါ..
မဒေါင်းခင်. Storage/sdcard0/viber/media/.stickers: ထဲ ဝင်ကြည့်ပြီး. ဖိုင်နာမည် တူ မတူ ကြည့်ဦးနော်. ဖရီးပေးထားတာနဲ့ ထပ်နေမှာ ဆိုးလို့ပါ..
မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ contact list တွေကိုဖွက်ထားလို့ရနိုင်တဲ့ Android Apk
ရည်းစားများများထားတဲ့ကောင်လေးတွေအတွက်ကတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကောင်မလေးတွေက ကိုယ့်ဖုန်းကို အနည်းနဲ့အများ ယူကြည့်မယ် ဖုန်းနံပါတ်တွေကြည့်မယ် ကောင်မလေးတွေကိုလည်းအအလို့မထင်နဲ့ ကိုယ့်ထက်လည်တယ်ဗျ အဲဒါကြောင့်ဒီလို apk လေးကတော့ သူတို့လည်ချင်သလောက်လည် အသွားစေရမယ်လို့အာမခံတယ်.......... ရေရေလည်လည်လန်းတယ် ....။
ဆေဖ့်ထားတဲ့ Contact list တွေကိုဖွက်ထားချင်သူတွေအတွက်အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှာအမှန်ပါ......
ဒီ Apk ကို passwod နဲ့ပိတ်ရမှာပါ..acc တစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်...acc က password မေ့နေခဲ့ရင်
အဆင်ပြေပါစေဗျာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 5:58 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
မြန်မာ Font အလန်းလေးများ
Android သမားတိုင်းအတွက် မြန်မာ Font.ttf အလန်းလေး ၁၀ ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Samsung တွေမှာပဲ သုံးလို့ရတဲ့ Zawgyi Design V1.0.apk ထဲကနေ ခွဲထုတ်ထားတာပါ။ Font Style လေးတွေ လန်းချက်ကတော့ Screen Shot လေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့။ ဘယ်လောက် လန်းလဲ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Mediafire Download Link =>> မြန်မာစာလုံးလှ ၁၀ ခု
Dropbox Download Link =>> မြန်မာစာလုံးလှ ၁၀ ခု အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Original Status Bar ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ Status Bar Mini Pro v1.0.117 Apk
Status Bar Mini Pro က ဖုန်းတွေမှာ Original ပါလာတဲ့ Status Bar ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပဲ.. Google Play Store မှာ HK$10.00 တောင် ပေးရတာ.. Original Status Bar ပျောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Original ကို မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်တာပေါ့.. ဘာတွေ ကောင်းတာလဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျ..
See More Features and HK$10.00 Buy in Google Play >>>
Download Link 3အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပြူ တာမလိုပဲ Root ဖောက်နည်း
ဘာဖုန်းလာလာ v root နဲ့ဖောက်မယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်လုလင်ပျို ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ
atyan chittal April 25, 2014 at 10:34 PM
အကိုကျေးဇူးဘဲဗျာ ကွန်ပျူတာမပါဘဲနဲ့root ဖောက်လို့မရဘူးလားရရင် နည်းလေးပြောပြပါလားအကို
ဆိုပြီး လာမေးထားလို့ အခု ဒီပို့စ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာမလိုပဲ apk နဲ့ဖုန်းထဲမှာတင် root ဖောက်လို့ရပါတယ်။
ဆော့ဝဲကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီး v root့ ထုတ်တဲ့ဆော့ဝဲပါ။
ဖုန်းအတွက်ကိုတော့ root master ဆိုပြီး လာပါတယ်။
ကျနော်ဒီ ANDROID လုလင် ဘလော့ ဒီနေရာမှာ တင်ထားပေးပြီးသားပါ။
အရင်ဆုံး root master.apk ကို အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ဖုန်းမှာအင်တာနက်မရှိရင်တော့ အင်တာနက်ရတဲ့ဖုန်းကနေ hospot လွှင့်ပြီး wifi ချိတ်လိုက်ပါ။
ကဲ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရပြီဆိုတော့ root master ဆော့ဝဲကို runလိုက်ပါ။
အပေါ်ဆုံးက root ဆိုတာလေးကိုပဲ နိုပ်လိုက်ပါ။
တစ်ပိုင်းကို 25% နဲ့ ပြပေးပါမယ်။
သူ့ဘာသူ root လုပ်ပေးနေပါမယ်။
အောက်ဆုံး ဆင့်ထိ 100% ထိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ok ပါပြီ။root ပေါက်သွားပါပြီ။
root တကယ်ပေါက်မပေါက် သိချင်ရင်တော့ ဖုန်းထဲကို root chacker ဆော့ဝဲထည့်ပြီးစစ်ကြည့်ပါ။
ဒီ root master ဆော့ဝဲ့က android version 4.2.2 ထိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:42 PM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Samsung Galaxy S5 Root Tool
Samsung Galaxy S5 အတွက် Root Tool ပါ.. အထဲမှာ Odin နဲ့တွဲပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်.. Debugging On ပြီး Download Mode နဲ့ဝင်.. Odin ရဲ့ Pda မှာ ခု ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ .tar.md5 ဖိုင်ကိုရွေးပြီး ကိုင်လိုက်ရုံပဲ... မြန်မာစာက အဆင်သင့်ပါပြီးသားဆိုတော့ မြန်မာစာထည့်စရာ မလိုတော့ဘူး...
Download : 17.3 MB
ကဲပြောနေကြာတယ်လိုချင်ရင်အောက်မှာသာဒေါင်းတော့ဗျို့http://www.mediafire.com/?12jlnv60758j54aအဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားလူတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့နေရာကို သိနိုင်တဲ့ APK
အခြားလူတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့နေရာကို သိနိုင်တဲ့ APK ပါ။
သူ့ဆီကို Where are you? လို့ SMS ပို့ပေးလိုက်ပါ။
သူ့ဘက်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ့် message box ဆီကို သူရှိနေတဲ့ Location ရောက်လာမယ်။ အဲဒါကို ကလစ်လိုက်ရင် သူရှိနေတဲ့နေရာကို မြေပုံနဲ့တကွမြင်ရပါမယ်။
မှတ်ချက်။ Internet connection ပေါ်မူတည်ပြီး မရတဲ့အခါလည်း မရတတ်ပါဘူး
လက်တွေ့စမ်းပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ...That's my location.
APK တွေစိတ်ဝင်စားရင်အောက်ပါ Page ကို Like ပါ။
အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့မိန်းကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါမိန်းကလေးတိုင်းမရှိမဖြစစ်စောင်ထားသင့်တဲ့အမြဲစောင်ထားတက်တဲ့အရာပါတစ်မျိုးမတွေးနဲ့နော် mirror မှန်ပါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မေ့ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှ့မဟုပ်မေ့တက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါလေးသာဆောင်ထားအဆင်ပြေတယ်ဒါများဖုန်းကင်မရာဖွင့်ကြည့်ရတာပဲလို့ပြောချင်သူများလည်းရှိချင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမယ့်မတူဘူးခဗျလုံးဝအကြည်ပါကျွန်တော်ဆိုမယုံဘူးအသြမိတယ်ဟားငါ့ဖုန်းကင်မရာကောင်းလှပေါ့ဒါပေမယ့်မဟုပ်ပါဘူးဒီဆောလ်ဝဲကြောင့်ပါဘက်ကင်မရာပါတယ်ဆိုသုံးလို့ရပီကဲအစမ်းသုံးကြည့်ကြပါအုံးနော် mediafire
MMTopup.apk < Developed by Daw Htar Htar Lwin >
Credit to - Daw Htar Htar Lwin
ဒီ APK ကတော့ မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားမှ မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားသို့ မဆို ငွေလှမ်းဖြည့်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
(မည်သည့်ဖုန်း Sim Operator အမျိုးအစားအတွက်မဆို User ကဖုန်းအမျိုးအစားရွေးပေးစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ငွေဖြည့်ခြင်း၊ အခြားဖုန်းအတွက်ငွေဖြည့်ပေးခြင်း၊ လက်ကျန်ငွေစစ်ခြင်း၊ လက်ကျန်ငွေကိုနေ့စဉ်မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်အလိုအလျှောက်ပုံမှန်စစ်ပေးခြင်း၊ အင်တာနတ်လျှောက်ခြင်း တို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ apk ရေးပေးလိုက်ပါတယ်…
လက်ကျန်ငွေပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆက်လက်မသုံးလိုတော့ပါက Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ‘နေ့စဉ်လက်ကျန်ငွေမစစ်ချင်တော့ပါ’ ကိုနှိပ်ပါ…)
အဆင်ပြေပါစေ.. ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 11:22 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ရှမ်းစာရေးချင်သူများအတွက် ရှမ်းစာနဲ့ရှမ်းကီးဘုတ် ကို Android ဖုန်းထဲ ထည့်သွင်းနည်း
Android ဖုန်းမှာ ရှမ်းစကားနဲ့ ရှမ်းစာရေးချင်သူအတွက် အဆင်ပြေနိုင်တဲ့
ရှမ်းကီးဘုတ်နဲ့ ရှမ်းစာပါ ။ ရှမ်းစာရေချင်သူက ကီးဘုတ်ပြောင်းပြီးတော့
ရေးနိုင်ပါတယ် ။ Zawgyi-Shan ဖောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်မျိုးစလုံးဖတ်နိုင်
ပါတယ် ။ မြန်မာစာပါရေးချင်ရင်တော့ မြန်မာကီးဘုတ်တစ်မျိုးမျိုးသုံးရေးပါ
ဖောင့်ကတော့ ဇော်ဂျီတွဲပြီးသားမလို့ တစ်ခုရှိတာနဲ့ ဘာသာ နှစ်မျိုးရတယ်
ဒီဟာကိုထည့်မယ်ဆို ဖုန်းက Root ထားမှရပါတယ် ။ အဆင်သင့်သုံးနိုင်ဖို့ 
Root ဆော့ဝဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ Root မလုပ်ရသေးသူများက Root ပါ
ပြီးရင် ရှမ်းဖောင့်နဲ့ ရှမ်းကီးဘုတ်ထည့်လိုက်ပါ။ အသုံးလိုသူ အောက်ကလင့်
Download - Pro Myanmar Root.apk
Download - Tai-Font.apkအဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ အခမဲ့ဆိုတဲ့ အရာတိုင်းမှာ ခန့် မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်.... သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 10:22 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
c8816D လိုင်းပျောက်2နေတဲerror ၇ှင်း
huawei c8816 network က power ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် လိုင်းလုံးလုံးပျောက်သွားတယ်
factory reset ချရင်ပြန်တက်လာတယ် နောက်ပြန်ပိတ်ပီးပြန်ဖွင်ရင်မတက်ပြန်တဲ့ error ကို firmware update တင်ပြီးရှင်းမယ်
C8816Då›ºä»¶ï¼ˆC8816D,Android 4.3,Emotion UIï¼ŒV100R001C92B180 - See more at:http://koye9992.blogspot.com/2014/04/c8816-c8816d-final-version အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
MTK Phone အတွက် Computer က IMEI ပြန်ရေးကြမယ်
တွေ့တာလည်းမျှဝေပေးတာပါ။ IMEI ပျောက်နေလို့ လာအပ်ထားတဲ့ဖုန်းလည်း တစ်လုံးမှ မရှိလို့ ဒီ Tool လေးကိုလဲ လုံးဝ မစမ်းသပ်ရသေးပါခင်ဗျာ။
အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ ထွေထွေထူးထူးပြောပြဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 6:00 AM 13 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
HuaweiSmartဖုန်းတွေမှာIMEIပျောက်ပြီးဖုန်းခေါ်မရသူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကိုကိုတိုးအောင်ခိုင် (ပျဉ်းမနား)မှရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာလေးကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကဲစပါမယ်….. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဖုန်းရဲ့IMEIပျောက်မပျောက်အရင်စစ်ဆေးပါ့မယ်…။ စစ်ဆေးပုံကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ*#06#ကိုနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးလိုက်ပါ။ IMEIမှာဘာမှမပေါ်တော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်nullပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့သေချာပါတယ်…။ အောက်ကနည်းလေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ.ကျွန်တော်အကိုတိုးအောင်ခိုင်(ပျဉ်းမနား)ကတော့Huawei U8825Dနဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်. ကဲစလိုက်ရအောင်ဗျာ…. -ပထမဆုံးDialerကနေပြီးတော့*#*#2846579#*#*ကိုနှိပ်ပြီးengineering modeကိုဝင်လိုက်ပါ….. -ပြီးရင်တော့ProjectMenu/Background setting/Usb ports setting and select Manufacture mode ကိုရွေးပေးပါ…. -ပြီးရင်Back Keyကိုနှိပ်ပြီး Background setting ကိုဝင်ပြီး Qualcomm background open setting ကိုသွားပါ ပြီးရင်တော့ background openကိုရွေးပါ (pass is0(ZERO)) -ပြီးရင်တော့ဖုန်းကိုUnknown Sourceနဲ့USB DebuggingကိုOnထားလိုက်ပြီးဖုန်းကိုRestartချလိုက်ပါ။ -ကွန်ပျူတာမှာတော့DFS ToolကိုInstallလုပ်ပါ။DFS Toolမရှိပါက(http://cdmatool.com/Demo)မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။Install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့DFS Toolကိုrunပြီးဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ -ပြီးတော့PortsကိုသွားပြီးdbAdapter Reserved InterfaceကိုDouble Clickနှိပ်လိုက်ပါ။ -ပြီးရင်တော့Ports Windowကိုပိတ်လိုက်ပါ….၊ -Programming tabကိုရွေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့IMEIအကွက်ထဲမှာမိမိဖုန်းရဲ့IMEIနံပါတ်ကိုမှန်ကန်စွာရိုက် ပြီးwriteလုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ -ပြီးပြီဆိုရင်တော့Portsကိုပြန်သွားပြီးdbAdapter Reserved Interface ကိုdisabeလုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ -ပြီးရင်တော့engineering menuကိုပြန်ဝင်ပါ၊ပြီးရင်ProjectMenu/Background setting/Usb ports setting and select Normal modeကိုပြန်ရွေးပါ။ -ပြီးရင်Background settingကိုပြန်ဝင်ပြီးQualcomm background open settingကိုဝင်ပြီးbackground closeကိုရွေးလိုက်ပါ။ -ပြီးရင်တော့ဖုန်းကိုRestartလုပ်လိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာရင်Sim-Cardထည့်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ရုံပါဘဲ…… ရေးသားသူ - ထက်အောင်မိုး (MMSD)
EMMC ဆိုတာဘာလဲ & EMMC ဖြုတ်နည်းတပ်နည်း...
EMMC Flash Chip (Embedded Multi Media Card ,Essentiallyamicro sd card that is soldered to the board)
(Boot +Rom 1+Rom2 & System memory +Internal memory)
1.Boot =Phone တစ်ခု စတင်အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် phone ရဲ့ os နဲ့ hardware ပိုင်းတွေကို မောင်းနှင် အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ အပိုင်းပါ/
2.Rom 1 =့ phone စတင်ဖို့ အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက်အဓိကမှတ်သားပေးတဲ့ အပိုင်းလေးပါ/
3.Rom2& system momory=Os user အတွက် Company က ထည့်ပေးတဲ့ software နဲ့ user အတွက် some space လေးပါ/
4.Internal memory = User တွေအတွက်ပါ/
5.RW ဖြစ်ရင်တော့ ပြင်လို့ရနိူင်ပါတယ် RO ဆိုရင်တော့ လဲရမှာပါ။
Credit to ..http://www.androidtablets.net/ & http://www.androidtablets.net/forum/nook-color-technical/12462-what-emmc.html အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
အကြောင်းအရာ hardware သိမှတ်စရာ
အကြောင်းအရာ safe move
ဗားရှင်းနိမ့် ဖုန်းများတွင် Application များများရအောင် ထည့်သွင်းနည်း
ဗားရှင်းနိမ့်တဲ့ Android ဖုန်း အချို့က Device Memory ပမာဏ နည်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် Apps တွေ အများအပြား Install လုပ်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါဆို Apps တွေ အများကြီး ဘယ်လို ထည့်သွင်းကြမလဲ?
ကွန်တော် စမ်းသပ်ထားတဲ့ နည်းလေးကို ပြောပြပါ့မယ်။
၁။ မိမိ ဖုန်းဟာ Root နဲ့ CWM Recovery ( Clock Work Mod Recovery ) ရှိပြီးသား ဖြစ်နေရပါမယ်။
၂။ SD Card 4GB / သို့မဟုတ် 4GB အထက် ကဒ် အသစ် တစ်ခုရှိရပါမယ်။
ရှေးဦးစွာ မိမိ ထည့်သွင်းထားသော
Apk များနှင့် ၎င်းတို့၏ data များကို Backup လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ System app & User app တွေကို data နှင့်တကွ Backup လုပ်ထားလို့ရတဲ့ Titanium Backup apk ကို သုံးဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
Titanium Backup Pro V4.0.0.apk အား Dropbox Link မှ ဒေါင်းရန် 1.3MB
Titanium Backup Pro V4.0.0.apk အား Box Link မှ ဒေါင်းရန် 1.3MB
Pro ဗားရှင်း ဆိုလို့ ဝယ်ထားတယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ Custom Rom တစ်ခုထဲမှာ တွေ့လို့ ဆွဲထုတ် ထားလိုက်တာပါ။
SD Card အသစ်ကို စသုံးပါမယ်။
SD Card အသစ်ထည့်ပီး CWM Recovery ဝင်လိုက်ပါ။
Advanced / Partition sd card / ကနေ 1GB လောက် ပိုင်းလိုက်ပါ။ SD Card တစ်ခုလုံးကို Format ချပီး Partition ပိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ စိတ်ကြိုက် app တွေထည့်ပေရော့။ Your Phone Storage is Low ပြတဲ့အထိ ထည့်ပစ်လိုက်ပါ။
Link2SD.apk လေးကို အောက်ကလင့် ကနေ ထပ်ဒေါင်းလိုက်ပါဦး။
Link2SD V3.1.5.apk အား Box Link မှဒေါင်းရန် 1.1MB
Link2SD ကို Install လုပ်ပီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ Partition ကိုရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ sdext2 လို့ရွေးပေးလိုက်ပါ။ Reboot ချခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Power ပြန်တက်လာရင် Link2SD ကိုဖွင့်ပါ။ ဘယ်ဘက်ဘေးနားကို လက်နဲ့ပွတ်ဆွဲပီး Link Dalvik-Cache File လုပ်ပါ။ Menu ကိုနှိပ်ပီး Multi-Select ကနေ User App တွေအားလုံးကို Select ပေးလိုက်ပါ။ Select ပေးပီးရင် Menu ကနေ Creat Link / OK လုပ်ပါ။
မိမိ ဖုန်းရဲ့ Storage Memory ကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။ Free Memory ဟာ အများကြီး ကျန်နေသေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ။ SD Card ဟာ Partition မဖြစ်ရင် အလုပ်မလုပ်ပါ။
C8815 Sim Error Fixer (Invalid Sim Error)
C8815 တွေ မှာ Sim ကတ် မသိတာတွေ အတွက်
အရင်ဆုံး မိမိဖုန်းကို Root ဖောက်ပါ။
ပြီးရင် ဒီ Apk လေးထည့်လိုက်ပါ။
မိမိ ဖုန်းဟာ C8815 ဖြစ် မှသာ အလုပ်လုပ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒီ Android Application ကို Playstore မှာ ဒေါင်းနိုင်အောင်
Playstore မှ ဒေါင်းပေးပါအုံးး
Playstore မရှိသူများ အတွက်လဲ
VRoot Version 1.7.6 Updated On 2014-03-26
2014-03-26 နေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ Vroot V1.7.6 လာပါပြီ...။
Version - 1.7.6
File Size - 6.89MB
Release Date - 26.3.2014
ရေးတဲ့အချိန် 1:21 PM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Fastboot မသွားပဲ Adb က နေပဲ တန်းသွင်းမှာပါ။
ဘာမှ မလိုအပ်ပါဘူး One Click နဲ့ Ok သွားမယ်။
Android Version 4.3 အထက် ဖုန်းတွေ မြန်မာစာ ထည့်ချင်ရင်ဒီဟာကိုယူသုံးပါ
Version မြင့်နေလို့ မြန်မာစာ အဆင်မပြေသူများ ဒီဆော့ဝဲလေးသုံးကြည့်ပါ
Font ပြောင်းမရသူများ Android Version မြင့်သူများ မြန်မာစာပြန်သွင်းဖို့ 
Zawgyi ဖောင့်ပြောင်းဖို့ အောက်ကလင့်မှာ Download ယူပြီးသုံးပါ ။
Download - Zawgyi Font for 4.3 အထက်
Root မလုပ်ရသေးသူများ ဖုန်းကနေ Root တဲ့ဆော့ဝဲကို အောက်ကလင့်မှာယူပါ
Download - Download- MMAS Root & Font Installer(1).apk
ရေးတဲ့အချိန် 7:50 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
Y535-C00 Root & Myanmar Font installer(တကယ်အဆင်ပြေတဲ့နည်းပါ)
ဒီဖုန်းရောင်းတာ မြန်မာစာထည့်တော့ တိုင်ပတ်နေလို့ ရောင်းရမယ့်ဟာ မရောင်းလိုက်ရဘူး
android လုလင် ဆိုတော့ ဒီတိုင်းဘယ်နေမလဲ root ဖောက် မြန်မာစာ ထည့်နည်း အပူတပြင်းရှာတာပေါ့ ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပါပြီ
အဆင်ပြေတဲ့ နည်းမို့ ဘ၀တူတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
1 ကို နှိပ်ပြီး Enter ကို ခေါက်လိုက် ပါ reboot ကျပြီး တက်လာလျှင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ………….
ADB Cleaner By Soe Htun Oo
ရေးတဲ့အချိန် 9:56 PM3comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Viber ဆော့ဝဲထဲက ၀ယ်ရမယ့် sticker လေးတွေကို Freedow...
မိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ contact list တွေကိုဖွက်ထားလို...
Original Status Bar ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ Status B...
Phone Cover ပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ Screen Lock ကျသွားမယ့်...
ရှမ်းစာရေးချင်သူများအတွက် ရှမ်းစာနဲ့ရှမ်းကီးဘုတ်...
ဗားရှင်းနိမ့် ဖုန်းများတွင် Application များများရေ...
Y535-C00 Root & Myanmar Font installer(တကယ်အဆင်ပြေ...